Warmly Welcome: ခဏတာ နှုတ်ဆက်ချင်တယ် ..
ဘီလိုဖြစ်တာလဲဗျ၊ ကားပေါ် ပြန်တက်တော့မလို့ လား။ ဒါဆိုလည်း အဆင်ပြေ ပါစေ ကိုဝင်းဇော်ရေ. ပြန်အလာကို မျှော်နေပါမယ်။
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာ ရှိပါစေ
ဘာတွေ ဖြစ်တုန်း ကိုဝင်းဇော်ရေ၊ အကို အောင်သာငယ် ကနားမယ်ဆိုလို့ သူဆီ ကွန့်မန့် ရေးပီး ပြန်လာတာ ခုဒီတယောက်ကလဲ နားမယ်ဆိုပါလား ၊ အလုပ်တွေ များလို့ နားမယ်ဆိုလဲ နားပါ၊ စာပြန်ရေးမဲ့ နေ့လေးကို စောင့်နေပါ့မယ်၊ tag ထားတာလေးကိုလဲ ကိုဝင်းဇော် ပြန်လာမှ ရေးတော့မယ်၊ မြန်မြန် ပြန်လာပါ၊မျှော်နေမယ်
စိတ်ထဲတစ်မျိုးကြီးပဲ၊ ဖြေသိမ့်နိုင်တာက စာတွေ အများကြီး ရေးထားပေးလို့ အချိန်မရွေး လာဖတ် နိုင်သေးတယ်။ ဘာဖြစ်ဖြစ် အမြန်ပြန်လာဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါသေးတယ်။
ဟင်... ဘာလို့နားမှာလဲ။ အကြာကြီး ခရီးသွားရမှာလား။ ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ? မိန်းမ သွားတောင်းတော့မလို့လား... အဟဲဟဲ :P ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံး အဆင်ပြေဖို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။ ဘေးရန်ကင်းကွာပြီး ဆောင်ရွက်သမျှ အရာရာတိုင်း စိတ်ကျေနပ်လို့ အောင်မြင်နိုင်ပါစေ...
ဘယ်လိုဖစ်တယ်။ ပြန်လာမယ်ဆိုရင် မျှော်နေ ပါမယ်။ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါစေ။
အစ်ကို ၀င်းဇော်ရေ.... ဘယ်လိုဖြစ်။ မနက်ရုံးမသွားခင် လာနှုတ်ဆက် တုန်းကတောင် မတွေ့ဘူး။ အခုနားမယ်ဆိုလို့ ဘယ်သွားမလို့လဲ။ Tag လို့အားရသွားပြီပေါ့လေ။ ဟုတ် တယ် ဟုတ်! စတာနော်။
အမ် နားပြန်ပြီ တယောက် ကိုသားငယ်က နားဦးမယ်တဲ့ ခု ကိုကြီးကလဲ နားဦးမယ် တယောက်ပြီး တယောက် ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ ဒါပေမဲ့ တော်ပါသေး၏ ခဏလို့ ပြောထားလို့ အကိုရေ အစစအရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေ။ ပြန်လာမဲ့ရက်ကို စောင့်နေပါတယ်နော့်
အမြန်ပြန်လာပြီး စာတွေ အများကြီးရေးဖို့ စောင့်နေပါမယ်။
လမ်းခရီးမှာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါစေ
အခုလို ပိုစ့်တွေ အများကြီး ရေးတတ်တဲ့ အကိုတစ်ယောက် ခဏပျောက်မှာတော့
သွားမဲ့ ခရီးအဆင်ပြေချောမွေ့ ပြီး မြန်မြန်ပြန်လာနိုင်ပါစေ
ဘလော့ဂ်ရေးတယ်ဆိုတာ အားမှ အချိန်ပေးနိုင်မှ ရေးနိုင်တာကို နားလည်တယ်။ ဘာအကြောင်း ရှိရှိ ပြန်လာမယ်ဆိုရင် ကျေနပ်ပါတယ်။ မျှဝေတာတွေ ဗဟုသုတတွေ ပျော်စရာတွေ မှတ်သားစရာတွေ အများကြီး ထားခဲ့တဲ့အတွက် မေ့မရနိုင်တဲ့ အစ်ကို တစ်ယောက်လို ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဝင်းဇော်လည်း အစစ အရာရာ အဆင်ပြေ ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ စေဖို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ပြန်လာမဲ့ရက်အထိ ပုလင်းခွံတွေနဲ့ ရေပြီး စုထားမယ် အဟတ် အဟတ်
ကိုဝင်းဇော် ဘယ်သွားမလို့လည်း နိုင်ငံခြားသွားမလို့လား ဒါမှမဟုတ် မင်္ဂလာဆောင်တော့မလို့လား ဟား၂ ဘာပဲဖြစ်၂ အမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့ပါ ပြီးတော့ စာတွေဒီထက်ပိုရေးနိုင်ပါစေရှင်.
ချိတ်မကောင်းဘူး။ မျက်ချိနောက် သက်သာလို့
ခရီးထွက်မယ်ဆိုလည်း လမ်းခရီး သာယာဖြောင့်ဖြူးပါစေ
၀ါမ၀င်ခင် မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ထင်တယ် အဆင်ပြေပါစေ
ဘလော့ကိုတော့ပြန်လာမှသိသား နားလို့ဝရင်ပြန်လာပါး) မျှော်နေမယ် ။
ပို့စ်တွေစောင့်မျှော်နေရင်း ကိုဝင်းဇော် ပြန်အလာကိုလည်း စောင့်မျှော်နေမယ်
ဒီကြာထဲ မျက်စိညောင်းသက်သာပြီး ဟိဟိ
အဟဲ ဘာမှန်းတော့ မသိပါဘူး
သွားပြီးရင်တော့ ပြန်လာခဲ့ပါ ...
လမ်းခရီး သာယာ ပါစေ ..
ခလုပ်မထ ဆူးမညိ ပါစေနဲ့ ။
ပြန်လာရင်တော့ မုန့်များများ ၀ယ်ခဲ့ပါ။
တစ်ယောက်ထဲ မထားခဲ့နဲ့ မီးမီ ကြောက်ကြောက်
ရှောင်ပုန်းချင်တာလားမှ မသိတာ မပြောမဆိုနဲ့ စိတ်တိုတယ် တကယ်။။။
အကိုကြီးရေ ရောက်ရာ အရပ်မှာပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပါ ဗျာ...။ ဟဲဟဲ ပျော်စရာ ရှိရင် ညီ့ကို သတိရ..။ စိတ်ညစ်
သုံးလတဲ့... သုံးလဆိုတာရက်ကိုးဆယ်နော်..။
အဲ့ရက်တွေအတွင်း ကျွန်တော့အကို တစ်ယောက် လုပ် ကိုင်သမျှ အလုပ်အကိုင်အား လုံး အဆင်ပြေ ချောမွေ့ ပါစေဗျာ...။ ကျန်းမာရေးလည်း ဂရု စိုက်ပါ..။
အတွေ့ အကြုံလေးတွေ လည်းမှတ်ထားပါ...။ ပြီးရင် အခွင့်သင့်သလို ပြန်ပြောပြ..။သင်ခန်းစာပေးပေ့ါ..။
ကြားရက်တွေ အနားယူ ဦးနော်... အလုပ်ပဲဖိ လုပ် မနေနဲ့ ..။ အင်တာနက်မရှိတဲ့နေရာ ရောက် နေလည်း ကမ္ဘာကြီးနဲ့ အဆက်မပျက်စေနဲ့ဦး..။
အဓိကကတော့ ကျန်းမာရေး ပဲ..ကျန်းမာရေး ကောင်းမှ ဘာမဆိုလုပ်နိုင်မှာ..။
သင့်ရဲ့ ညီ ...
:( ဦးချစ်ဖေ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ မအားတော့ဘူးလား။ အဲဒီလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ ဆက်ရေးပါဦး။
အသွားရှိရင် အပြန်ဆိုတာရှိမယ်၊ သွားပြီးပြန်လာပေါ့၊ မျှော်နေမယ့်သူတွေက အများသား၊ အားကျတယ်၊ နောက်ပြီး အမြင်ကတ်တယ်။ တစ်ယောက်မှ မိတ်မဆက်ပေးလို့။ ဖွမှာကြောက်လို့ မဟုတ်လား။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ပြန်လာစေချင်တယ်။
အစစ အဆင်ပြေစေချင်တယ်း-) (-း
ဆရာ ၀င်းဇော် ခင်ဗျာ..... တစ်ခုခုကို ကျုပ်ကြိုသိနေသလိုပဲ.... ပြီးတော့လည်း ပြီးသွားတာပါပဲလေ.... ကိစ္စတွေ ပြီးရင်သာ မြန်မြန် ပြန်လာခဲ့ပါ ဟုတ်ပြီလား...... ဘီအီး+ဘီယာ,ရမ်=ဆော်ဒါ,
နှစ်ပက်တစ်ခွက် ဆိတ်ပေါက်ချက်နဲ့ စောင့်နေပါ့မယ်
အဆင်ပြေပြေနဲ့ အရောက်ပြန်လာဖို့ စောင့်မျှော် နေပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ။.
သွားသတိ ၊ စားသတိ ၊ နေသတိ ရှိပစေ။
ဘာအကြောင်းလေးကြောင့် ဆိုတာတောင် မသိရတဲ့ အတွက် တအုံနွေးနွေးပါပဲ
ထပ်မံ လာရောက် ဖြေရှင်းပါ။
တပတ်အတွင်း မလာနိုင်ပါက ရဲစခန်းတွင် လူပျောက် အမှုဖွင့်ရွေ့ လက်ခံထားသူအား တရားဥပဒေအရ တရားစွဲမည်ဖြစ်သည်။
အပေါ်က လူပျောက်ရှာဖို့ မိုးညိုရဲစခန်းက လာရှာ နေပြီ ကိုဝင်းဇော်ရေ .. အမေ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ကဲ သားရေ အမြန်ပြန်လာပါ၊ မပြန်လာ နိုင်သေးရင်လဲ အကျိုးအကြောင်း သွားပြောချေဦး။ အဟေ ဟေး
ခရီးထွက်ဖြစ်ရင်လည်း လမ်းခရီးသာယာ ဖြောင့်ဖြူး စေချင်ပါတယ်။ ကွာဝိုင်းဝိုင်း မားဝိုင်းဝိုင်း ပေါ့ .. ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေပါစေ မောင်ဝင်းဇော်ရေ..
စာရေးကောင်းတဲ့ မောင်ဝင်းဇော်ကို ချစ်ခင်တဲ့သူတွေ
လှပတဲ့ နေ့လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ ဆုတောင်းပေး ပါတယ်။ လမ်းခရီးသာပါစေနော်။
လွမ်းနေမှာနော်.. ၀ဲ..အဲ..အဲ့... တွားမယ်ချိုဒေါ့ နိုချင်ရာဘီ... ညန်ညန်ပန်ရာခဲ့နော် ဦးဦးဝင်းချော်..
ကိုဝင်းဇော်ရေ ကျနော်လည်း ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်နဲ့ဘဲမို့ နားလည်ပေးပါတယ်၊ ပြန်လာမယ့်နေ့ကိုမျှော်နေမယ်၊ နှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ နိုင်ပါစေဗျာ၊
မဖတ်ရသေးတဲ့ အကြွေးတွေကို များနေတယ်။
နောက်ထပ် ပိုစ့်အသစ်တွေကို မျှော်နေမယ်နော်။
အားလုံးအဆင်ပြေရင် အမြန်ပြန်လာပါ ကိုဝင်းဇော်။
၃လ မကလို့ ဘယ်လောက်ကြာကြာ။
ပြန်လာရင်တော့ လက်ဆောင်ဝယ်ခဲ့နော် :)
ပြန်လာမှာ မလား ကိုဝင်းဇော် .. စောင့်နေမှာနော် .. မလာပဲတော့ နေနဲ့ ... မဖတ်ရသေးတာတွေ ဒီနေ့ အကုန် ဖတ်ပြီးသွားပြီ .. အဆင်ပြေပါစေ
ဟင်... ဂယ်လား...မျက်စေ့ရှုပ်တာ တယောက်တော့ သက်သာသွားပြီပေါ့နော်..
ပြောမယ်များ..ထင်နေလား ... မထင်နဲ့နော်
ပာာဗျာ။ ရုတ်တရက်ကြီးဆိုတော့ ရင်ထဲမှာ တမျိုးကြီးပဲ။
မြန်မြန်ပြန်လာနော်။ ကျွန်တော်နဲ့ ငယ်လေး မျှော်နေမယ်။
goodbye လို့ ပြောမဖြစ်အောင် စောလွန်လွန်း ပါသေးတယ်။ ပြန်ရောက်ရင်ဖြင့် သံချောင်းခေါက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ .. သီချင်းလေး ကြိုက်တယ်။ တစ်ယောက်ယောက် ကိုရည်ညွှန်းနေ သလားပဲ။ အားလုံး အဆင်ပြေပါစေ။
ခုမှ ဘလော့တကာလည်ဖတ်နေတာ ... ကိုယ်သိတဲ့သူတွေ တော်တော်များများ နှုတ်ဆက်နေကြသလားလို့ထင်ရတယ် ... ဘာတွေဖြစ်နေကြပါလိမ့် .... ရှမ်းလေးရေ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေ ...
ခုမှ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ရောက်ဖူးတယ်။ ရောက်ရောက်ခြင်းပဲ နှုတ်ဆက်ထားတယ် ဆိုတော့ အင်း .......... ကောင်းရော။
ကိုဝင်းဇော်ရေ.. အများကြီးမပြောတော့ပါဘူးဗျာ။ ခဏဆိုတဲ့အတိုင်း ခဏပဲ ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ။ အမြန်ဆုံး ပြန်လာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သတိရနေမှာကတော့ အသေအချာပါပဲဗျာ။
သူက (နေ) ရယ်ပဲလား
ကိုယ်က ၀င်တယ် သူက ထွက်သွားတယ်
ကိုယ်က ရောက်တယ် သူက မရှိပြန်ဘူး
ဘလောဂ့်ထဲမှာ တွေ့တွေ့နေတယ်၊ သွားရသေးဘူးလား၊ မသွားဖြစ်တော့တာလား။
မျက်စိနောက်တာ မဟုတ်ဘူး။ မျက်စိရှုပ်တာ
ဟား ၃ ......။
ပြန်မလာသေးဘူးလားဗျို့ မလာမချင်း လာအော်နေမှာ :D
အဆင်ပြေတဲ့တစ်နေ့ပေါ့ ကိုဝင်းဇော်... အမြန် အဆင်ပြေပါစေဗျာ.. ဒီလိုပဲ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်.. စောင့်နေကြပါတယ်
မတွေ့တာ အတော်ကြာပေါ့ ပြန်လာသေးဘူးလား အဆင်ပြေပါစေ ပျော်ရွှင်ပါစေ